Higuain, Suarez, Morata, Dembele, Kessie, Ramsey & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga | Gaaroodi News
Higuain, Suarez, Morata, Dembele, Kessie, Ramsey & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga
Waxa si Rasmi ah u furmay suuqa kala iibsiga January kaas oo ay kooxo badan suuqa u gali doonaan sidii ay u xoojinlahaayeenkooxdooda si koobabka ugu tartamaan qaybta dambe ee xilli ciyaareedka
Sidoo kale waxa jiri doona xiddigo si aad ah u doonaya inayisaga tagaan kooxaha ay haatan joogaan sabab la xidhiidha ciyaaris la,aan siayu raadsadaan koox ay si joogto ah ugu ciyaaraan
Hadaba kooxda.com ayaa idiin soo gudbin doonta maalinwalbasubaxnimadawararkii ugu dambeeyay ee ay wargaysyada kubada cagtu kaqoreensuuqa kala iibsiga.
Kooxda chelsea ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhawdahay in ay hesho saxiixa xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Ac Milan ee Gonzalo Higuain iyaga oo Alvaro Morata u diri doona dhan kale (Sun).
Dhanka kale kooxda Ac Milan ayaa ka fiirsanaysa in ay iibiso xiddiga khadka dhexe uga ciyaara ee Franck Kessie kaas oo lala xiriirinayo kooxaha Tottenham iyo chelsea laguna qiimeeyo 45 milyan oo euro (Calciomercato).
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Tottenham ee Mousa Dembele ayaa lala xiriirinayaa kooxda ka ciyaara horyaalka Chinese Super League ee Beijing Sinobo Guoan (Sky Sports).
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Barcelona ee Denis Suarez ayaa si aad ah ugu dhaw in uu ku biiro kooxda Arsenal (Sport).
Dhanka kale tababare Unai Emery ayaa maamulka kooxdisa u sheegay in uu doonayo in uu sii haysto ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkan (London Evening Standard).
Kooxda Liverpool ayaan xiddiga khadka dhexe ee Adam Lallan u ogolaan doonin in uu ka tago kooxda inta lagu jiro suuqa January (Sky Sports).
Kooxaha Fenerbahce iyo Southampton ayaa dhanka kale dalabyo amaah ah ka soo gudbiyay xiddiga reer England ee Adam Lallana (Fotomac).
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda PSG Adrien Rabiot ayaa si xor ah ugu biiri doona kooxda Barcelona dhamaadka xilli ciyaareedkan (Guardian).
Kooxda Barcelona ayaa Lionel Messi u isticmaali doonta soo xero galinta xiddiga kooxda Ajax ee Frenkie de Jong (Bleacher Report).
Kooxda chelsea ayaa ku kalsoon in ay 40 ilaa 50 Milyan oo euro ugu qancin doonto in ay Ac Milan uga hesho xiddiga khadka dhexe ee Franck Kessie iyaga oo sidoo kale heshiiska ku dari doona xiddiga Tiemoue Bakayoko (Gazzetta dello Sport).
Xiddiga diirada us aaran kooxda chelsea ee garabka uga ciyaara kooxda PSV ee Hirving Lozano ayaan ka tagi doonin kooxda inta lagu jiro suuqa Jnauary sida uu sheegay wakiilkiisa Mino Raiola (Team Talk).